debian.social: tranonkala hanamorana ny fifandraisana sy ny atiny eo amin'ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa | Avy amin'ny Linux
Vao haingana, Navoaka ireo mpamolavola tetikasa Debian amin'ny alàlan'ny fanambarana ny fampidirana ny andiana serivisy sosialy Debian horaisina ao amin'ny tranokala debian.social ary ny tena tanjony dia ny hanamora ny fifanakalozana sy ny fifanakalozana atiny amin'ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa.
Ny tanjona faratampony dia ny mamorona toerana azo antoka ho an'ireo mpamorona sy mpanohana ny tetikasa, izay ahafahan'izy ireo mizara vaovao momba ny asa vita, maneho ny valiny, mifampiresaka amin'ireo mpiara-miasa aminy ary mizara fahalalana.
Amin'izao fotoana izao, ireto serivisy manaraka ireto dia natomboka tamin'ny fomba fitsapana:
pleroma.debian.social: (ampiasain'ny rindrambaiko Pleroma) - sehatra microblogging itsinjaram-pahefana mampahatsiahy an'i Mastodon, Gnu Social, ary Statusne
pixelfed.debian.social: (ampiasain'ny rindrambaiko Pixelfed) - Serivisy fizarana sary azo ampiasaina, ohatra, hamoahana ny tatitra an-tsary.
alemainvest.debian.social: (ampiasain'ny rindrambaiko PeerTube) dia sehatra itsinjaram-pahefana handaminana ny fampiantranoana horonantsary sy ny fandefasana horonantsary, izay azo ampiasaina hampiantranoana fampianarana video, resadresaka, podcast, ary ny tatitra momba ny fivoriana sy ny fandraketana ny kaonferansa. Ohatra, ny horonantsary fihaonambe Debconf rehetra dia alaina ao amin'ny Peertube.
jitsi.debian.social: (mampiasa rindrambaiko Jitsi): rafitra iray amin'ny kaonferansa video amin'ny alàlan'ny Internet.
wordpress.debian.social: (mampiasa rindrambaiko WordPress) - Sehatra iray ho an'ireo mpamorona bilaogy.
manoratra: (ampiasain'ny rindrambaiko WritingFreely) - Rafitra itsinjaram-pahefana ho an'ny bilaogy sy famoahana. Ny fanandramana koa dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fametrahana rafitra bilaogy itsinjaram-pahefana miankina amin'ny sehatra Plume.
Amin'ny ho avy lavitra, Tsy azo lavina ihany koa ny fahafaha-mamorona serivisy fandefasana hafatra mifototra amin'ny Mattermost., sehatry ny fifandraisana mifototra amin'ny Matrix sy serivisy amin'ny fifanakalozana rakitra fisie mifototra amin'ny Funkwhale.
Ny ankamaroan'ny serivisy dia itsinjaram-pahefana ary manohana ny federasiona hifandray amin'ny mpizara hafa. Ohatra, amin'ny fampiasana kaonty amin'ny serivisy Pleroma, azonao atao ny manara-maso horonantsary vaovao amin'ny Peertube na sary ao amin'ny Pixelfed, ary koa mamela hevitra ao amin'ireo tambajotran-tserasera Fediverse nozaraina ary mifandraika amin'ireo serivisy hafa manohana ny protokolon'ny ActionPub.
Toy izany Navoaka ihany ny sehatra, saingy tsy natomboka satria mbola misy ny olana tokony hovahana.
Ohatra amin'ireo olana fantatra ankehitriny fa mikasa ny hamaha ireo mpamorona Debian alohan'ny hidirany amin'ny dingana beta mety, dia lazao izao manaraka izao:
Mbola eo am-pamolavolana ny politikam-pahafaham-po, ny lahatsoratra CoC amin'ny tranokala sns. Raha te hanampy amin'ny antonony ianao, midira amin'ny fantsona IRC anay
Avo kokoa noho ny mahazatra ny enta-mavesatra amin'izao fotoana izao, efa hifarana ny fanafarana ny horonan-tsary Debconf farany farany teo amin'ny Peertube
Pleroma dia manana sary manome sosokevitra vitsivitsy izay aleontsika esorina
Peertube dia manome hadisoana mpizara anatiny rehefa mampakatra avatar misy mangarahara
Mbola tsy hitantsika ny fomba hiatrehana ny fangatahana fomba GDPR tsara kokoa. Ohatra, raha mangataka kopian'ny data rehetra ho azy ireo ny mpampiasa izao dia antenainay ho vitsy dia kely ny fangatahana toy izany ka azonay atao ny manodina azy ireo amin'ny tanana.
Olana CSS kely isan-karazany
Ahoana ny fomba hahazoana kaonty amin'ny debian.social?
Mamorona kaonty amin'ny serivisy, mikasa ny hamorona rindranasa ao amin'ny salsa.debian.org (kaonty salsa.debian.org no ilaina).
Na dia nilaza aza ny mpamorona fa mbola miasa izy ireo ary mbola tsy azo idirana ny serivisy:
Mbola aloha ho antsika ary mbola betsaka ny asa tokony hatao. Mandritra ny fotoana maharitra, mikasa ny hanamarina ireo serivisy ireo izahay raha tsy amin'ny salsa.debian.org. Ny serivisy sasany dia anisany làlana, ny sasany mety mila fotoana bebe kokoa sy fiaraha-miasa miaraka amin'ny hulu.
Mandritra izany fotoana izany, azonao atao ny mangataka kaonty iray na maromaro amin'ireo serivisy ao amin'ny salsa.debian.org, amin'izay mifanaraka amin'ny sehatra sosialy amin'ny kaontinao salsa. Hanampy tsikelikely ny kaonty izahay rehefa mahatsapa ho azo antoka kokoa amin'ny serivisy amin'ny fomba voalohany sy voalohany.
Farany, raha te hahalala bebe kokoa momba ilay tolo-kevitra ianao avy amin'ireo mpamorona Debian, azonao atao ny manamarina ny famoahana ireo lisitra fandefasana mailaka an'i Debian. Ny rohy dia ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » debian.social: tranonkala hanamorana ny fifandraisana sy ny atiny eo amin'ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa
Efa navoaka ny topi-maso faharoa an'ny Android 11 ary ireo no fanovana azy